Forex အားလုံးကိုဘဏ္ဍာရေးတူရိယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်ဆုံးသြဇာပေးထားပါတယ်။ Forex ကုန်သွယ်အတွက်သြဇာများအသုံးပြုခြင်းသင်ငွေသွင်းမြို့တော်၏ပမာဏထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်တန်ဖိုးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်သာ $ 5000 ၏မြို့တော်ကို အသုံးပြု. $ 500,000 တန်ဖိုးရှိငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ဆိုလိုတာက 1: Forex ကုန်သွယ်ယေဘုယျအားဖြင့် 100 ဦး၏သြဇာရှိပါတယ်။ ဝင်ငွေအကျိုးအမြတ်အမြဲအစား paid မြို့တော်ထက်စာချုပ်များ၏တန်ဖိုးအားဖြင့်များပြားစေလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သြဇာများအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းလက်ရှိမြို့တော်နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းအလားအလာတိုးမြှင့်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ခဲ့စေသည်။